काँचो प्याज खानु हुन्छ ? खानु हुन्न भने आजै बाट खानुहोस् यी ४ रोग निको हुन्छ ! – Khabar Silo
थाहा पाउनुहोस् पानी पिउने सही तरिका
Posted on November 18, 2020 November 18, 2020 Author khabar silo
पानी हरेक प्राणीका लागि महत्वपूर्ण पदार्थ हो । जीउन अत्यावश्यक पनि छ । आयुर्वेद र योगमा पानीलाई भोजनभन्दा पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । हाम्रो शरीर करिब ७० प्रतिशत हिस्सा पानीले बनेको हुन्छ । शरीरमा हरेक दिन ६ देखि १० गिलाससम्म शरीरकालागि पानी आवश्यक पर्दछ । तर नियमिति पिइने पानी सेवनको सही तरिका थाहा नहुदाँ पानी पिउदा […]